PPC vs. SEO na Spy vs. Spy
PPC mifanohitra amin'ny SEO: Spy vs. Spy
Talata, Febroary 22, 2011 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Chris Bross
Misy mahatadidy ny tantara an-tsary taloha Spy vs. Spy? Mampihomehy! Ny mpitsikilo tsirairay avy dia mikononkonona foana handresy ny iray hafa. Misy fisainana ara-barotra toy izany ankehitriny raha toa ka mandinika ny paikadim-barotra amin'ny motera fikarohana ny orinasa. Mifidy eo noho eo ny orinasa: Pay Per Click (PPC) mifanohitra amin'ny Organic Search (SEO).
Ny tanjon'ny tetikady marketing marketing dia ny hiteraka fitarihana na fivarotana. Ny PPC & SEO dia samy manana ny tombony ananany ary azo ampiasaina hanatrarana ROI lehibe kokoa.
Ny programa PPC & SEO fanampiny dia mety hisy fiatraikany lehibe:
Fisondrotana efa ho 12% amin'ny tahan'ny fiovam-po mitambatra rehefa miaraka miaraka ny rohy Paid sy Organic
Fisondrotana ny tombom-barotra andrasana, eo anelanelan'ny 4.5% sy 6.2% rehefa samy miseho miaraka ireo rohy SEO sy PPC raha ampitahaina amin'ny tsy fisian'ny iray na ny iray hafa
PPC sy SEO - Misy namanao ato amiko!
Fanapahana SERP - Ny fampiarahana ny PPC sy ny SEO miaraka dia hahazo ampahany lehibe amin'ny pejy valin'ny Search Engine (SERP). Fananan-karena bebe kokoa nohanin'ny orinasa iray, tsy dia kely loatra ho an'ireo mpifaninana aminy. Ary koa, hisy vintana lehibe kokoa hampiakarana ny taha-tsindry avy amin'ny click-through anao.
Cross Channel Insights - Ny PPC dia misy mihoatra ny teny lakile, io koa dia ny famoronana fandefasana hafatra amin'ny ad an-dahatsoratra mba hampirisihana ny famoronana tsindrio sy famoronana pejy fanatsarana ny fiovam-po. Ny fampiasana doka PPC an-tsakany sy an-davany ho ampahany amin'ny famaritana meta SEO On-Site dia tokony hampitombo ny click-through organik. Ny fahitana avy amin'ny pejy fampidinana PPC dia afaka mampiakatra be ny fiovan'ny tranonkala amin'ny ankapobeny.
Hatsarao ny vokatra ankapobeny - Ny zava-drehetra ao amin'ny varotra motera fikarohana dia manomboka amin'ny fikarohana teny lakile. Ny fisafidianana teny filamatra kendrena SEO dia lalao maminavina efa nianatra tokoa. Ankoatr'izay, ny laharana biolojika dia tsy hitranga tampoka ary ny fandrefesana ny fahombiazan'ny teny fanalahidy SEO dia mitaky fotoana. Ny PPC dia mora kokoa ny mampihatra ary haingana kokoa ny mahazo angona azo zahana. Mampiasà PPC hanombanana raha toa ka mahomby na tsia ny teny fanalahidy alohan'ny fotoana sy loharano taonina ampiasaina hamoronana fampielezan-kevitra SEO mety hiteraka fidiram-bola na tsia.
Ao anatin'ny tontolon'ny fikarohana an-tserasera miovaova ankehitriny, ny orinasa iray dia tokony handinika mafy ny paikady marketing amin'ny fikarohana izay fitambarana mitohy eo amin'ny PPC sy ny ezaka SEO hahatratrarana ny tamberim-bola.
Tags: fikarohana biolojikafikarohana karamamandoa isaky ny kitihoppcSearch MarketingSEOmpitsikilo
Ahoana ny fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy?
Iza no andefasanao mailaka?
Torohevitra tsara, PPC dia afaka mahazo tombony amin'ny SEO rehefa manondro indrindra amin'ny teny fikarohana teny lakile.
Mar 26, 2014 ao amin'ny 10: PM PM
Ny fifandraisan'ny teny lakile dia iray amin'ireo lakilen'ny fahombiazana amin'ny Google AdWords. Na dia mety halaim-panahy aza ny fampidirana ny teny fanalahidy rehetra azonao raisina, dia fantaro fa io matetika no fahadisoana # 1 ataon'ny mpanao dokambarotra rehefa mamorona ny fampielezan-kevitr'izy ireo voalohany. Ny prospect izay "mila anao izao" ihany no tadiavinao ary ho voatosika hifandray amin'ny orinasanao, na hividy ny serivisinao raha manindry ny doka anao izy ireo. Mandeha amin'ny teny lakile diso ny olona matetika ary maharary azy ireo izany amin'ny fotoana lehibe. Ny orinasako dia very salan'isa $ 0.67 isan-tsindry mandra-pahatapitry ny an'i Simon tao amin'ny RDM (ny mailaka azy dia simon.b@resultsdriven.org) dia nanampy anay hahazo ny ganagana nisesisesy tamin'ny fampielezan-kevitra ary ankehitriny dia mahatratra $ 2.19 isaky ny tsindry eo ho eo fa $ 0.67. Raha miresaka aminy ianao dia ampahafantaro azy ny namanao an'i Dean Jackson.